တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံနှင့်အတူတရုတ် Tungsten Solid Carbide Rods | NCC
အရွယ်အစား: D1.0 ~ 40.0mm, L ကို: 13 ~ 700mm
1. tungsten အစိုင်အခဲ carbide ချောင်းတွေပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ် extrusion ခြင်းဖြင့်ပုံသွင်းသည်။
3. ကြမ်းတမ်းသော tungsten-cobalt carbide ပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ်ဘား၏အပြင်ဘက်အချင်းကိုမည်သည့်သည်းခံမှုနှင့်အညီသန့်စင်ပြီးပွတ်တိုက်နိုင်သည်။ ဘုံသည်းခံစိတ်များသည် h5, h6, -0.005 စသဖြင့်၊ နှင့် carbide rod end end chamfer ကိုလည်းပြုပြင်နိုင်သည်။
4. ကာဗွန်ချောင်းများသည်အထွေထွေသံမဏိ၊ သံ၊ သံမဏိ၊ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသောသံမဏိ၊ နီကယ်အခြေပြုနှင့်တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်လုပ်ငန်းများအတွက်သင့်တော်သည်။ အကြမ်းအားဖြင့်လှည့်ဖေါက်ခြင်း၊ အုတ်ကြိတ်ခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ carbide လှံတံ၏ Tyopes
1.Unground Long ကချောင်းတွေ
TheOL ။ Unground Long ကချောင်းတွေ၏
အရွယ်အစား (DxL, mm) သည်းခံစိတ်
D (mm) လီ (မီလီမီတာ)
: D [1-3) x310 / 330 0,30 ~ 0,55 0,00 ~ + 4,00
: D [3-12) x310 / 330 0,30 ~ 0,60 0,00 ~ + 4,00
: D [12-20) x310 / 330 0,30 ~ 0,65 0,00 ~ + 4,00
: D [20-40] x310 / 330 0,30 ~ 0,70 0,00 ~ + 4,00
2.Unground ဖြတ် -to- အရှည်ချောင်းတွေ
TheOL ။ unground ဖြတ် -to- အရှည်ချောင်းတွေ၏
D / L (mm) မီလီမီတာအတွက် TOL.of: D & L ကို
L ကို <= 70 70<L<=150
Previous: Tungsten အစိုင်အခဲ Carbide အဆုံး Mills က
Next: အရည်အသွေးမြင့်မားသော Tungsten Carbide nozzle